Nhau - Maitiro ekusiyanisa KN95 mask
Nzira yekusiyanisa KN95 mask
Kunyangwe hosha yekoronavirusi yenoverengeka yakatangwa, misika inodzora zviremera nemasangano evatengi pamatanho ese vakadaidzira kutendeka kwebhizinesi uye manejimendi anoteerera mutemo. Nekudaro, kuchine mabhizinesi mazhinji asina hunhu anopokana nemhepo uye vanotengesa masiki ekunyepera kutora mukana wepundutso zvisiri pamutemo. Kunyanya kana iyo maski yaputswa, shamwari zhinji dzichanetseka kuti vangangodaro vakatenga masiki ekunyepera, saka ikozvino ndigovana mamwe acho. Ruzivo rwekuti ungaudza sei kuti mask ndeyechokwadi here kana kuti kwete.
Zvino, inova coronavirus mask ndeyekuvhiya mask uye KN95 mask. Sekureva kweBeijing Consumer Association, pane zvikamu zvitatu zvekusefa kwemasikisi ekurapa ekurapa. Kana uchitenga, vanosimbisa kuti iyo YY0469-2011 iri pane iyo kurongedza. Uye iyo muyero weYY0469-2011 yekuvhiya mask ndiyo yakajairwa yekurapa yekuvhiya mask.
pakubata kwedu kwezuva nezuva nemamwe masks eKN95, Beijing Consumer Association, pamwe chete neyakajairika 3M mask, zvakare inopa nzira yekusiyanisa chokwadi kubva kune chenhema
Kunhuhwirira: 3M masiki haina hwema hunoshamisa, inongogonesa kabhoni, ine hwema hushoma hweakagadziriswa kabhoni, uye hapana hwema hwerabha.
2. Tarisa kudhinda: mafonti ese ari pa3M masks anodhindwa nemalaser, uye mamaki ekudhinda anoratidza 45 degree oblique angle, nepo emanyepo ari inki yekudhinda. Zvakare, kudhindisa ingi kazhinji kunotungamira kune isina kuenzana inki. Kunyanya, madhizaini ekudhinda echokwadi e3M masiki ane mitsetse, nepo iwo masiki ekunyepera ari madota akatenderera. Zvakare, iyo chaiyo mamask anoratidza kuti ivo vanogona kuenderana neiyo inoyerera kodhi pane pasuru Kune rimwe divi, zvinhu zvemanyepo hazvigone.
3. Tarisa logo uye chitupa: La logo uye QS certification hazvidhindwe pabhokisi, asi zvine zvinyorwa zviviri zvidiki. Chero bedzi masiki asiri epamba akaunzwa zviri pamutemo, vanofanirwa zvakare kuve neLa certification, nepo masiki epamba achifanira kuve neQS uye La chitupa.
Sekureva kweBeijing Consumer Association, vatengi vanogona kufona 12315 kuti vataure zvinhu zvemanyepo. Ndinovimba kuti munguva ino yakakomba yedenda, vanamuzvinabhizimusi vasina hunhu vanogona kutendeuka nekukasira, kuti tikwanise kushandisa ino inoshamisa nguva takachengeteka.
Yirentang mask chiyeuchidzo:
Kune vanhuwo zvavo, zvinonyanya kushanda kurega mashoma N95 masiki aende kumberi-kunhandare yehondo uye nekuona kuchengetedzeka kwevashandi vezvekurapa, izvo zvinoshanda zvakanyanya kupfuura kupfeka masiki vega. Zvakare, iyo yakawedzera iyo yekumberi-mutsetse kurwisa kugadzirira kuri, zvakanyanya kutandara nevakawanda vatengi vanogona kutenga masiki.
Kugadzirwa kweMisa kweN95 mask
kurwisa hutachiona ihondo yesainzi. Isu vanhuwo zvavo hatifanirwe kungozvidzivirira isu chete, asi zvakare hatikonzere kunetsa nyika. Tinofanira kuedza nepatinogona napo kuti tibude zvinoenderana nemitemo yenyika. Tinofanira kutora matanho ekudzivirira kana tichienda kunze. Tinovimba kuti denda richapfuura nekukasika. Isu tinovimba kuti vemberi-vezvechiremba vashandi vanogona kuzvidzivirira.
Post nguva: Oct-15-2020
Kunshan Gubang Inodzivirira Equipment Technology Co, LtdKero: Kuvaka 13, Kwete. 169 Shimeng Road, Qiandeng Town, Kunshan City, Jiangsu, China
Teri / Fax: 0086-512-57576086
Yakakosha Español Servicio